Ụbọchị My Pet » 5 Nzọụkwụ na Imeri Mmekọrịta Nkwurịta Okwu mgbochi
emelitere ikpeazụ: oké osimiri. 23 2020 | 2 min agụ
Di na nwunye-apụghị izere ezere na-ezute nkwurịta okwu hiccups n'ụzọ, ma ha na-ọhụrụ akpa ma ọ bụ ememe iri afọ ọnụ. Ndị a missteps na-esi ike na-awụgharị ma na-achọ maara mgbalị si ma mmekọ. Na-echeta ndị na-esonụ Atụmatụ ga-enye aka na ndị na-emesị nghọtahie:
1. Zere nkịtị ọgwụgwọ: Women na ndị ikom abụọ bụ ndị ikpe mara nke a tactic, na na ọ bụ incredibly ize ndụ ma na-ebibi. Mechisịrị ọnụ ala na nnoo mechisịrị ọnụ onye gị si, na nke ahụ bụ bụghị uru na-agwa okwu na ezigbo na-ese okwu. Ka ike dị ka ọ pụrụ iyi, na-eji okwu gị na-egosi mmetụta gị, na atụla egwu iji nweta kpọmkwem. Cheta, na ezi onye na-aga na-arụ ọrụ gị na mmekọrịta nsogbu, iji mmetụta gị dị ka eji megide gị.
2. Emela echiche: Yiri nkịtị ọgwụgwọ, echiche na-atụ ọzọ nke na-ahapụ onye gị na uche si, na na ọ bụ nnọọ mma ma onye. Ị nwere ike iche na ya obere Ibọrọ pụtara na ọ na-efu mmasị, ma o nwere ike dị nnọọ nwere ọtụtụ na-aga na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-ajụ na-adabere kama na gị pụrụ ichetụ n'echiche, ị na-adịghị na-enweta eziokwu, na ị na ikekwe nnọọ ka onwe gị elu maka ibu esemokwu na ọgwụgwụ.
3. Otito ezi àgwà: Ọ bụrụ na ị na-eche dị ka onye gị na-adịghị na-egosi na ị dị ka ukwuu n'anya dị ka tupu, agbalị na-eweta ya na a ekele site aro. "M n'anya n'ezie gị hugs,"Na, "M na-atụ uche gị n'isi ụtụtụ ozi ederede,"Bụ ma ndị na-abụghị na-egbu ihe atụ nke na-agba ume na omume ị na-achọ. Ụzọ a, ị ga-esi gị mgbe gafee na ihe ọ bụla accusatory asụsụ.
4. Nwere mmetụta gị: Ndị ikom na ndị inyom na-ma n'ụzọ mmetụta uche, ma ha na-egosi mmetụta ndị na kpamkpam dị iche iche na ụzọ. A nwaanyị nwere ike na-eti mkpu, na a nwoke nwere ike fume. Ma bụ nti mmetụta uche n'ụzọ, na ma nke onye na-ele ha. Kama ịgwa onye gị, "I mere ị na-eche nzuzu,"Nke bụ ihe accusatory na nkwupụta, kọwaa otú obi dị gị a possessive ụda, na-enye nkọwa.
Ọmụmaatụ, "Echere m na nzuzu mgbe ị mere ndị ogbi keisi ocha egwuregwu" bụ obere na-esekarị okwu karịa, "Gị mgbe niile na-eme ka m onye nzuzu." Ihe mbụ okwu na-enye onye gị na a ohere ịkọwa onwe ya na-ahapụ ya mara ezigbo isi iyi nke nke.
5. Nọrọ mma: Nke a bụ a toughie, Ama m! Ọ bụ nnọọ mfe iwe ma ọ bụ na-ekwu ihe ị na-adịghị pụtara. Ime gị mma ka mma ma rụọ ọrụ iji idozi nke healthily. Chọpụta, ihe na-aga ịfụ mgbe ụfọdụ. Nke ahụ bụ a nkịtị akụkụ nke mmadụ abụọ na-ekere òkè ha ndụ ọnụ. Dị na-echeta na-anọ echeta ihe ndị mere na ị na-ọnụ na akpa ebe, na-etinye na-elekwasị anya na ịnọgide na-enwe na nkekọ.